Maalin: Janaayo 5, 2018
Gaadiidka Dadweynaha ee Goobta Saklikent Ski
Dowlada hoose ee Magaalo-weynaha waxay bilaabeen inay adeegyo gaadiid dowladeed siiyaan Xarunta Saklıkent Ski Center taas oo ah qiimaha ugu muhiimsan Antalya. Qorsheynta Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalaga-weyn iyo Waaxda Nidaamka Tareenka, Saklıkent, muwadiniinta [More ...]
XGOX 2017 Waxay U Socotaa Malaayiin Militari 336
adeegyada gaadiidka dadweynaha waa mid ka mid ah magaalooyinka yar ee Turkey Ankara degmada Metropolitan, jiraan barta. Dr. Kadib Mustafa Tuna waxaa loo magacaabay Duqa Magaalada Caasimadda, [More ...]
Muwaadiniinta u safray inay aadaan shaqada iyo iskuulka aroortii hore, ayaa la yaabay suugada degmada Zeytinburnu ee horteeda xarunta Marmaray Kazlıçeşme. Dawlada Hoose ee Zeytinburnu, si ay shaqo iyo iskool ugu aado maalinta qaboobaha [More ...]
Tareenka miyiga ee Istanbul
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) ayaa iscasilay Duqa magaalada Kadir Topbas lix qandaraas oo nambada dhulka hoostiisa ah oo la qabtay muddadii, kuxigeenkiisii ​​Mevlut Uysal la kansalay. Bayaanka ka-noqoshada ayaa noqon doonta ”mid dhaqaale oo dheeraad ah marka la cusbooneysiisto [More ...]
Konya Metro Ma jirto sabab sababta Ayman Yildirim?
Bursa waa magaalo soo saarta isla markaana ugaarta dhaqaalaha dalka. Si kastaba ha noqotee, nasiibdarro muuqaal caadi ah, magaaladeenii hore ee Bursa ma bixin karto waxa ay ka soo saarto gobolka. Amiyane, gobolka Bursa, 'qaadada qaadiga oo qaado qaaddo'. Bursa [More ...]
RayHaber 05.01.2018 Warbixinta Shirka
Ma jiraan diiwaanada qandaraaska ee taariikhda 05.01.2018 ee nidaamkayaga.
Degmada Elazig waxay abuurtay mashruuc cusub si loogu abuuro fursado shaqo oo loogu talagalay dhalinyarada isla markaana loogu diyaariyo mustaqbalka. Wasaaradda SODES ayaa maalgalisay “Xarunta Tababarada Saadka ee degmada Elâzığ [More ...]
Qorshe hawleedka waxqabadka qaranka ee la ansaxiyey
Qorshaha Waxqabadka Awooda Tamarta ee Qaranka ayaa la qaatay. Qorshayaasha waxqabadka 9 waxaa lagu abuuray cinwaanka Gaadiidka. Faa'iidada canshuurta ee gawaarida wax ku oolka ah iyo qawaaniinta gaadiidka dadweynaha ayaa socda. Kordhinta tamarta ee Turkey ah [More ...]
Agaasinka Guud ee Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara ee “EGO” wuxuu sii wadaa tababarada xirfadaha shaqo ee gudaha ah oo sanad walba la siiyo si kor loogu qaado aqoonta xirfadeed ee wadayaasha. Adeeg joogto ah oo ay bixiyaan khubaro ku xeel dheer cilmiga [More ...]
Koonfur Afrika ayaa tareenka ku dhuftey gaariga, 18 ayaa dhintay
Koonfur Afrika, ugu yaraan 18 qof ayaa ladilay markii nin wax dhisayay uu ku dhacay gaari xamuul ah. Adeegga caafimaad ee ER24 wuxuu shaaca ka qaaday in dadka 268 ay dhaawacmeen. Tareenka rakaabka ee ka socda Port Elizabeth ilaa Johannesburg [More ...]
Ogeysiiska Qaadashada: Qalabka bedelka sdhuuqda waxaa loo iibin doonaa hababka isgaadhsiinta iyo isgaarsiinta
Qalabka isweydaarsiga sdh ee loogu talagalay calaamadaha iyo nidaamyada isgaarsiinta ayaa la iibsan doonaa. [More ...]
Maanta taariikhda: 5 January 2017 Soo saarida 13 Sanadka X
Maanta oo ah Taariikhda 5 Janaayo 1870 Sida shirkad Faransiis ah oo ku taal Paris, Hirsen waxay aasaastay eli Societe Imperiale des Chemin de Fer de la Turquie d'Europe “. 5 Janaayo 1871 Yedikule-Bakırköy-Yeşilköy-Küçükçekmece [More ...]